Askari Mucaarad oo Meydkiisa laga helay god qashin | KEYDMEDIA ONLINE
Askari Mucaarad oo Meydkiisa laga helay god qashin
Askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya kana qeyb qaatay gadoodkii ciidanka ee ka dhacay bishii hore magaalada Muqdisho ayaa inta la dilay meydkiisa lagu tuuray god qashin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Saraakiishii iyo Askartii ciidankii Badbaado Qaran ayaa cabsi xoog leh soo wajahday kadib markii mid kamida askartii qeybta ka ahaa gadoodkii iyo dagalladii bishii April ka dhacay magaalada Muqdisho meydkiisa laga helay god qashin dhexdiisa oo ku yaalla agagaarka xerada Generaal Kaahiye (School Polisiyo).
Askarigaan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Muqtaar Deeqoow ayaa kamid ahaa Askartii hore ee Nabad Sugidda ee NISA, sida ay Keydmedia Online ka ogaatay Sarkaal codsaday in aan Magaciisa la shaacin.
Heshiiskii Mucaaradka iyo Dowladda Federaalka kadib, Ciidamadii Badbaado Qaran oo intooda badan ay ka yimaadeen gobolka Shabeelaha dhexe ayaa dib ugu laabteen difaacyadii, waxaana jiray Askar uu kamid ahaa Maxamed oo dib ugu laabtay guryahoodi.
Maxamed ayaa waxaa la waayay laba habeen kahor iyadoo ugu dambeyn meydkiisa laga helay god qashin, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka war bixiyaan sida uu dhibka u dhacay iyo xogta ay heleen kaddib markii ay ogaadeen dhacdadan xanuunka badan oo lagu dilay askari hore oo ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya.
Keydmedia Online ayaa la xariirtay Wasaaradda Amniga laakiin wali jawaab kama aysan helin.